Ny orinasa dia nanangana ny tsipika famokarana fonon-tànany manokana (Suqian, Jiangsu). Mamokatra sy mivarotra fonon-tànana fanadinana nitrile fitsaboana (tsy misy vovoka) isika. Ny slogan'ny orinasanay dia ny hifantoka amin'ny fanaovana ny tsara. Manana fahaizana matanjaka amin'ny famokarana sy ny vidin'ny fifaninanana izahay. Noho izany dia afaka miantoka ny fandefasana ara-potoana ny baikon'ny mpanjifa izahay. Manaraka ny tanjon'ny orinasa "Ny kalitao dia fiainana; tohizo hatrany ny fanatsarana ny serivisy ho antoka; ny mpanjifa aloha hahazoana fandresena". Izahay dia manao izay tsara indrindra vitantsika amin'ny fanomezana vokatra kilasy voalohany sy serivisy voalohany. Izahay dia mikendry ny hankafizanao ny fitafianao, hankafizanao ny fiandrasanao. Ny sampanay dia manana sampana any Canada sy Shenzhen, Sina. Misolo tena ihany koa ny sarontava marika sinoa marobe, fitafiana mitoka-monina, akanjo fandidiana, milina oksizenina, vaksinina.
Ny orinasan'ny orinasanay dia manana fitaovana mandroso sy mpiasa tompon'andraikitra maro, noho izany dia manana famokarana matanjaka sy vidin'ny fifaninanana izahay, manaraka ireto misy sary vitsivitsy aseho
Fanadiovana bobongolo-tanana → lafaoro bobongolo-tanana → tanky coagulant → lafaoro → tanke lateky 1 → lafaoro → tanke latata 2 → lafaoro → fanasana rano → lafaoro → fikotrana → lafaoro lehibe → fampangatsiahana → fantsom-panasana klôro → Fanasana → Fanamafisam-peo → Fanamasinana → Fiara-PU → Lafaoro famaranana → Famoahana mialoha → Fanolorana demony → Fisafoana → Fonosana → Firimana → Fandefasana
Ny fonon-tànantsika dia nampiasaina tany amin'ny firenena maherin'ny 10: Eropa: Italia, Alemana, France, Lithuania, Switzerland, Sweden, sns; Azia: Japon, Malezia, sns;
Oseania: Aostralia; Amerika: Amerika, Brezila, sns Afrika: Afrika atsimo, Malawi, sns. Ity manaraka ity dia fampirantiana ataon'ny sasany amin'ireo mpiara-miasa aminay.
Q Nahoana ianao no tokony hividy aminay fa tsy amin'ny mpamatsy hafa?
A Ny fitaovantsika mahay, vokatra mahay, vidin'ny fifaninanana ary ny tsipika famokarana matihanina.
F Inona ny fe-potoana iantsoana anao momba ny varotra?
EXW, FOB, CFR, CIF no teny iarahanay mivarotra. Raha ilaina dia azonao atao ny mampiasa DDP na DDU.
Q Azonao ekena ve ny OEM?
A Ny orinasanay dia afaka manaiky OEM, azafady mba omeo anay ny antsipirian'ny baikonao. Ny departemantan'ny famokarana dia hivoatra sy hamokatra arakaraka ny fepetra takianay manokana.
Q Mitsapa ny entana rehetra alohan'ny fanaterana ve ianao?
A Eny, manana fomba fiasa mialoha mialoha ny fandefasana izahay. Izahay dia manamarina ny bika aman'endriny, ny toe-batana sy ny toetr'ireo entana. Ny entana rehetra dia tsy maintsy mandalo ny fizahana rehetra alohan'ny handefasana azy ireo eny an-tsena.
Q Afaka mamokatra avy amin'ny santionany ve ianao?
A Eny, azontsika atao ny manamboatra ny vokatra arakaraka ny santionanao na ny fepetra takiana manokana.
F Inona ny politika ohatra?
A Afaka manome santionany vitsivitsy izahay. Na izany aza, ny mpividy dia tokony handoa ny vidin'ny fandefasana sy ny haba ary ny haba.
F Inona ny ora fanaterana?
Amin'ny ankapobeny, 7-10 andro aorian'ny fandoavana. Ny ora fandefasana azy dia miankina amin'ny entana sy ny habetsany andoavanao.
F Inona ny fepetra fonosana?
A Matetika, fonosinay anaty boaty sy baoritra miloko miaraka amin'ny anaranay ny marika. Raha manana patanty voasoratra ara-dalàna ianao dia azonay ampidirina amin'ny boaty miloko izany rehefa nahazo ny taratasinao nomena alalana.
Jiangsu Jinlian Medical Technology Co., Ltd. Izahay dia mamokatra sy mivarotra fonon-tanana fanadinana nitrile fitsaboana (tsy misy vovoka) fonon-tànana fanadinana nitrile. Manana fahaiza-manao famokarana matanjaka sy vidin'ny fifaninanana izahay, noho izany manome antoka ny fandefasana ara-potoana izahay.